Isu Lakho le-B2B Kufanele Lifake I-Ecommerce | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 2, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ubuwazi ukuthi singeze i- services shop eMartech? Asikukhuthazi ukuthi kube yitoni (okwamanje) njengoba siqhubeka nokukitaza, kepha sibona izinkampani eziningi ngokwengeziwe ezifuna nje amanani entengo angaphambili futhi ezingafisi ukusebenzisana ngqo neqembu elithengisayo ukubhalisela umkhiqizo noma insiza. Kungakho sakha le ngxenye yesiza sethu futhi siyaqhubeka nokwengeza imikhiqizo nezinsizakalo - kusuka ukucwaningwa kwamabhuku ku-infographics.
Njengoba i-eCommerce kanye ne-omnichannel yokuthenga okuhlangenwe nakho kukhuphuka kakhulu ku-B2C, zizofana nokuthenga kwabathengi. Njengoba abathengi be-B2B nabathengi bempahla kungabathengi ezimpilweni zabo, ukulindelwa kwamapulatifomu wokuthenga edijithali okufundisayo, okusebenza kalula kusebenza kakhulu ekuthengeni izimoto ezintsha zezinkampani njengoba kwenza uku-oda izicathulo ezintsha.
Sabikezela wonke amabhizinisi azoba ibhizinisi le-eCommerce… Kodwa akuyena kuphela! I-Accenture Interactive ihlolisise abasebenza ezingeni eliphakeme ledijithali ne-eCommerce ezinhlanganweni ezinkulu ze-B2B ukuqonda isimo esiguqukayo sokuthenga online.
Inani labathengi be-B2B abathenga izimpahla kwi-inthanethi lenyuke lisuka kuma-57% ngo-2013 laya kuma-68% ngo-2014.
I-86% yezinhlangano ze-B2B manje zinikela ngezinketho zokuthenga online.
Kuphela ngama-50% ezinhlangano ze-B2B ezithola okungaphezulu kwengxenye yeshumi yemali yazo evela ekuthengisweni online.
Ukhiye owodwa kulokhu esikubonile ngukuthi izivakashi ze-B2B azifuni ukukhokha ngaphambili zisebenzisa ikhadi lesikweletu kulokhu kuhlanganyela okukhulu. Lokho akuyona inkinga manje njengoba sinikeze amasu amaningi wokukhokha, kufaka phakathi ama-invoicing.
Tags: Accentureb2bukuhweba ngekhompiyutha kwe-b2binfographicomnichannelukuthengisa onlinethengisa izinsiza online
Okuthile Kunuka Izilinganiso Nezibuyekezo ze-plugin ye-WordPress